Global Voices teny Malagasy » Melaneziàna mpanao gazety, miampanga ny loza mitatao tsy mitsaha-mitombo amin’ny fahalalahan’ny asa fanaovana gazety · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Novambra 2019 14:55 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Oseania, Aostralia, Fiji, Indonezia, Papua Nouvelle Guinee, Solomon Islands, Vanuatu, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Nihaona tao Brisbane, Aostralia ireo mpanao gazety avy any Fiji, Vanuatu, Nosy Solomona, Papoazia Ginea Vaovao sy Papoazia Andrefana, mba hanatrika ny fitokanana sy fanombohana ny Vovonana momba ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety Melaneziàna izay nokarakaraina  ho famaliana ny ‘fitomboana tsy mitsaha-mitombon'ny famoretana atao amin'ny media’ ao amin'ny faritra.
Nasongadin'ny  fanambaràna nivoaka farany avy tamin'izany ireo loza mitatao manjo ny fahallahan'ny media ao Melanezia:
Isankarazany ireo olana noresahana nandritra ilay vovonana, toy ny fanarahamaso, ny fepetra any amin'ny toeram-piasàna, ny fiovàn'ny toetrandro, ary ny fiantraikan'ny media sôsialy. Nanangona antontan-kevitra ihany koa i Philip Cass, tonian-dahatsoratry ny Revion'ny asa fanaovangazety ao amin'ny Pacific Media, momba ny fivoriana iray  mahakasika ny sasantsasany amin'ireo fanamby atrehan'ireo vehivavy mpanao gazety:
Fotoana iray tsy nampoizina tao amin'ilay vovonana ny famelarana ny sainan'ny fahaleovantenan'i Papoazia Andrefana. Faritany iray ao Indônezia i Papoazia Andrefana, toerana tsy azon'ireo vahiny mpanao gazety hidirana.  Nihamafy ny fifanenjanana tato anatin'ny taona vitsivitsy satria tohizan'ireo vondrom-poko sasany ny fanamafisany ny zony hizaka tena.
Fotoana iray nafàna tany amin'ny fiafaràn'ny lahatenin'ny Prof David Robie ny nanazavany ny fandaharanasany androany alina. Misaotra an'ireo nanatrika. #PapoaziaAndrefana  #FahalalahanAsaFanaovanaGazety  #MMFF 
Namoaka fangatahana manokana nalefa ho an'ireo governemantam-pirenena ihany koa ny Vovonana ho an'ny asa fanaovana gazety melaneziàna. Ho an'i Papoazia Gine Vaovao, nangatahana ny governemanta mba ‘hanaja ny fahaleovantenan'ireo trano famoahambaovao sy ireo mpanao gazety'’ ary ‘hanamafy ny lalàna fiarovana ny ady amin'ny kolikoly sy ireo mpitoroka mba hampiatiana ireo mpanao gazety sy ireo matihanina avy amin'ny media”. Ho an'i Fiji, notakiana amin'ny governemanta ny hanafoanana ny didim-panjakana momba ny media, izay ‘milaza sazy henjana ary ny fanjavozavoan'ireo fandikandalàna lazainy dia misy fiantraikany  manempotra ny media malalaka.’ Ho an'i Vanuatu, nantsoin'ireo mpandray anjara ny governemanta hiverin-dàlana tsy hanafoana ny fahazoandàlana hiasa nomena an'i Dan McGarry, talen'ny media ao amin'ny Daily Post.
Scott Waide, mpanao gazety avy any Papoazia Gine Vaovao, nanoratra antso iray  tamin'ny anaran'ireo mpandray anjara hafa:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/30/145290/
 fivoriana iray: https://asiapacificreport.nz/2019/11/16/praise-for-young-pacific-journalists-and-threats-to-journalism-in-the-region-highlighted-at-melanesian-media-freedom-forum-day-two/
 tsy azon'ireo vahiny mpanao gazety hidirana.: https://www.theguardian.com/media/2019/jul/22/freedom-of-the-press-in-indonesian-occupied-west-papua
 antso iray: https://mylandmycountry.wordpress.com/2019/11/18/mcgarrys-removal-barring-by-vanuatu-government-is-an-attack-on-media-freedom/